ကျော်ထက်ဝင်း (နည်းပညာ): Blog Post အောက်မှာ Comment Form ထဲ့နည်း
Blog Post အောက်မှာ Comment Form ထဲ့နည်း
Classic Templates သုံးတဲ့သူငယ်ချင်းများ Comments ပေးလို့ မရဖြစ်နေကျတာ ကြုံတဲ့သူငယ်ချင်းများလည်ရှိမှာပါ။ မကြုံတဲ့
သူငယ်ချင်းများလဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ ကြုံဖူးတယ်။ ဒါနဲ့ အောက်ပါနည်းကိုသုံးကြည့်တာ ဆင်ပြေသွားတယ်။ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းများလည် ဒီလိုကြုံခဲ့ရင် အောက်ကနည်းက အဆင်ပြေမှာပါ။Step#11. http://draft.blogger.com ကို Sign In လုပ်လိုက်ပါ။2. Setting >> Comments >> Comment Form အကွက်မှာ Embedded below post ကို select ပေးပါ။3. ပြီရင် Save လိုက်ပါ။Step#21. မိမိ Blog မှ Layout ကို click လိုက်ပါ။2. Edit Html ကို ထပ် click လိုက်ပါ။3. Expand Widget Templates ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။4. အောက်က code ကို ရှာလိုက်ပါ။<b:include data='post' name='comments'/>5. အထပ်ပါ code ရဲ့ အောက်မှာ အောက်က code ကို ထည့်လိုက်ပါ။<b:include data='post' name='comment-form'/>6.
ပြီရင် Save Templates ကို click လိုက်ပါ။ ပြီရင် မိမိတို့ Post တစ်ခုကို click လိုက်ရင် အောက်မှာ comments ပေးလို့ရတဲ့ Box တွဲပါလာမှာကို တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။